Waxyaabaha ay ka sheegayaan diinta waa been waxayna isku muujinayaan in ay sharciga Islaamka raacaan” ayuu ku yiri warsaxaafadeed uu soo saaray Khalid Bin Farhan al-Saud. Waxa uu ugu baaqay shacabka sacuudiga in ay ku kacaan dowladooda isagoo sheegay in ay ka mid noqdaan mucaaradka.
Habkaan gaaban waxaad ku ogaan gartaa gabaryaheey shaqsiyadaada si sahal ah adiga oo eegaya habka aad dharka isaga bixiso ee aad u joogteyso. Si Tartiib Ah:Hadaad si tartiib dharka isaga siibto waxaad tahay gabar si weyn isugu kalsoon , caqli badan , neceb dooda iyo wax waliba oo qaylo keenaya sida codka Tv-ga , Musicada , waxadna jecashay in ...
Armaan Malik taageerayaashiisa Bollywood-ka waxay ku naaneysaan "amiirka Jacaylka". Fannaankan 25 jirka ah oo shaashadaha caalamka ay ka daawadaan dad lagu qiyaaso in ka badan labo bilyan ...
Sep 08, 2010 · Sheekh Xassan Dahir oo ku labisnaa dharka ciidamada, sitayna qori AK 47 ah ayaa sheegay in dagaalka ay kula jiraan ciidamada dowladda KMG, kuwa Ahlu Sunna Waljamaaca iyo AMISOM ay sii wadi doonaan tan iyo inta dalka ay ka saarayaan waxa uu ugu yeeray “cadowga Alle.”
Faysal Boostada ayuu ka soo saaray waraaqdii ay Ayaan u soo dirtay, horay ayuu ka dareemay inay Ayaan ka timid, isla markii ayuu furay wuxuuna ku dhex akhriyay isaga oo gaarigiisa ku dhex jira, wadnihiisu aad ayuu u garaacayay, eray kasta oo uu akhriyaa macne weyn ayuu samaynayay, wuxuu dareemay in Ayaan ay wali jeceshahay, markii uu dhammeeyay ...
Furmay Baabuurkii, waxaana laga soo saaray Gabadhii yareed oo Caafimaad qabta, ka dib ayaa la Wareystay Gabdhii, waxeyna Dadkii u sheegtay sidii ay Wax u dhaceen, iyadoo Hadalkeeda ku biloowday:- Waxaan ka imid Dugsi anoo meesha maraaya ayuu i qabtay, waxna kama sameynin, ka dib ayuu Baabuurka dhankiisa Dambe igu soo Xiray, markaan waayey wax ...
Dharka ayuu iga saaray. 2020 07 k6gm siilka iga gali guska. php on line 76 Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home. 11 Feb 2011 Siilka Iga Gali Guska 1 day ago Dabada Iga Was Aboowe. ah in ay aadin m. comgabar ka shekeysay siilka macan iyo sida videos mobilesiilka iga wasay aj.
Habkaan gaaban waxaad ku ogaan gartaa gabaryaheey shaqsiyadaada si sahal ah adiga oo eegaya habka aad dharka isaga bixiso ee aad u joogteyso. Si Tartiib Ah:Hadaad si tartiib dharka isaga siibto waxaad tahay gabar si weyn isugu kalsoon , caqli badan , neceb dooda iyo wax waliba oo qaylo keenaya sida codka Tv-ga , Musicada , waxadna jecashay in ... "Gudoomiyuhu hadalka saxa ah wuu sii daynayaa, hadalka qaladka ahna wuu inaga joojinayaa’, ka dibna ilayn waa tii la yidhi "waayeel hadalkiisa kaftan ayuu ku dhamaystaaye", markaa ninkii baa ku jawaabay "Oo hebel muxuu ka kala garanayaa hadalka saxan iyo hadalka sirgacan", hadana waxa lagu yidhi wuu kala garanayaa. Sep 24, 2009 · Inta aan xaaska guriga joogo ahaa, waxaa damcay in aan raadiyo xaaladda reeraheena, laakiin intuu dareemay ayuu I saaray cadaadis badan, la iima ogoleyn in aan guriga ka baxo oo markii uu guriga ka baxaayo wuxuu igu xiri jirey silsilad weyn deriska wuxuu ugu sheekeyn jirey in aan ahay naag saaqidad ah oo isaga diideysa uuna aabaheey igu daray ... Ninkii dhuubnaa markii ugu horaysay ee uu darsaday ee uu afka saaray ayuu ku dhici waayay inuu afka galiyo kulayl awgiis,inyar markuu kor uhayay ayuu hadana umohday inuu afka galiyo wuuna kudhici waayay,wuxuu fiiriyay xagii ninka waxa uuna arkay ninkii oo fandhaalkii 5aad afka galiyay markaasuu kuyidhi (War haynaga qabawdee bal ukaadi ... Jan 16, 2014 · J:Muddooyinkan Hargeysa ayuu ku maqnaa dhowaan ayuu soo laabtay, saaka ayuu ii yeeray, wuxuuna igu yiri hadal kale nooma dhexeeyo waxaan doonayaa qoraalkaagii inaad raaligelin ka bixisid waxaan ku iri waxaagu wax ka badanne ma ina adeernimo ayaa ku jiidatay oo aad xittaa qarsan weysay, waxaan kaloo ku iri haddii ay aniga aragtida aan qabo ay ... Mudo ayuu kala go’ay xariirkanaga, hadana isaga ayaa ilas soo xariirey, wuxuuna ii sheegey inuu hada baxayo si’uu usoo qaato wixii kaharey madaxiisa. Hadana,markii uu soo laabteyna waan soo siyaartey,waxaana wajigiisa kamuuqatey farxad aan lasoo koobi karin! Markii uu dhammaystay ayuu ku yiri “soo baxa adoonyahay aan edebta lahayn oo aniga iga matagaysa”. Wax xoogaa ah markii ay socdeen oo ammintuna ay duhurkii ku dhow dahay, waxay aragtay niman tira badan oo hoos fadhiya balbalo qoryo laga dhisay maryo dhammaad ahna dusha looga daboolay.
May 10, 2020 · Madaxweynaha oo warbaahinta la hadlay goor dhaweyd, ayaa ugu horrayn shaaca ka qaaday in natiijooyinkii ugu dambeeyey ee uu saaray mishiinka casriga ah ee lagu baadhayo xanuunka COVID-19 muujinayaan inuu cudurku si xawli ah bulshada ugu dhex faafayo, islamarkaana bulshada looga baahan yahay inay halistaas soo korodhay ku baraarugsanaato, kuna dhaqmaan tallaabooyinka xanuunka lagaga hortegi karo.
“Kuma kufsadeen, sababtuna waxay tahay uma qalantid,” ayuu Bolsonaro ku yiri Maria. Bolsonaro ayaa sidoo kale guux dhaliyay sannadkii 2017 isaga oo meel fagaare ah ka hadlaya ayuuna soo hadal qaaday gabadha uu dhalay. Wuxuu yiri “Waxaan dhalay afar wiil, intaas ka dibna waan nuglaaday oo ilmihii shanaad gabadh ayuu iga noqday”. Xigasho BBC
Markii uu dhammaystay ayuu ku yiri “soo baxa adoonyahay aan edebta lahayn oo aniga iga matagaysa”. Wax xoogaa ah markii ay socdeen oo ammintuna ay duhurkii ku dhow dahay, waxay aragtay niman tira badan oo hoos fadhiya balbalo qoryo laga dhisay maryo dhammaad ahna dusha looga daboolay.
Somali book - Free ebook download as PDF File (.pdf), Text File (.txt) or read book online for free. Somali book
Already waxaan horey u xisaabinaynay 135 milyan oo qof oo adduunka ku baahsan, kahor COVID, anagoo u soconayna qarka u saaran macluul. Oo hadda, falanqaynta cusub ee COVID, waxaan eegeynaa 260 milyan oo qof, mana ka hadlayo gaajo.
Allah Jannada ha ugu bishaareeyo, Aabbahay iyo Hooyadeey iyo walaalaheey ayaa iga soo saaray xaaladdaas. Dishibiliin adag ayaa la ii yeelay xagga wakhtiga dugsiga quraanka, xilliga aqoon barashada guriga, xilliga cayaaraha iyo dabaasha, xilliga nasashada iyo xilliga hurdada.
ayuu iga shumiyay iguna yiri “Guurkeena waa Bil kadib Illaah waxaan ka baryaa inuu wiil iga kaa siiyo” aniga hadalka ayaa igu dhagay markaan arkay Libaan oo safar galaayo waxaana ku iri “Waan kuu xiiso doonaa” Subaxdi danbe ayuu baxay Waxaan intuu sii maqnaa Illaah uga baryaayay inuu caafiyo gacaliyaheeyga. 4 sacadood kadib ayuu isoo ... May 28, 2012 · Gareth Barry Oo Laga Saaray Xulka England Ee Euro 2012 Iyo Phil Jagielka Oo Lagu Bedelay May 28, 2012 Leave a comment Gareth Barry ayaa seegi doona ciyaaraha Euro 2012 ee xulkiisa uu ka qeybgalayo ka dib dhaawac soo gaaray, waxaana booskiisa lagu bedelay daafaca Phil Jagielka.
Sawir-gacmeedka wargeyska Charlie Hebdo ayaa oo wejiga hore kusoo baxay ayaa muujinayey Erdogan oo fadhiya isagoo xiran funaanad yar iyo Nigis, gacantana ku haya cabitaan Khamri ayna dhinac taagan tahayhaweeney xijaab xiran, isguna uu dharka ka qaadayo. Wiilkii, inta istaagay, ayuu ninkii foolka ka dhunkaday. Illeyn, mar baa farxaddu illin kaa keentaa, isaga oo ilmaynaya, ayuu inta uu misena gacan qaaday, ayuu si kal-iyo-laab ugu yiri, “Aad baad u mahadsan tahay adeer, Alle, sida aad iga farxisay, ha kaaga farxiyo”. Sep 21, 2017 · Habeenkii 16-aad ayuu fursad kooban u helay iyada oo dukaan aan gurigooda ka fogeyn ka soo adeegeysa. Buux degdeg ayuu tallabada u soo dhuftay isaga oo is leh caawa yaanay fursaddani ku dhaafin, magaalada waddooyinkeedu waa mugdi oo laydh ma laha. Cambaro aqalkooda iyo dukaanka inta u dhaxaysa ayuu is taagay. Saliiddii Naagtii Ninkeedii Ka Dhintay Haddaba waxaa Eliishaa u qaylisay naag u dhaxday qoonkii nebiyada ahaa midkood, oo waxay ku tidhi, Ninkaygii oo addoonkaaga ahaa waa dhintay, oo adna waad og ta Markii uu labo todobaad socdaalayay ayuu subaxdii dambe u tagay nin uu aqalkiisu gubanayo, aqalkii ayuu la damiyay wuxuuna waydiiyay sababta uu aqalku u gubtay, wuxuuna ninkii ugu jawaabay ” todobaad walba wuu iga gubtaa” , markaa buu ku yidhi ” war hadde anigu nin shiikh ah oo 3-su’aalood kaliya la waydiiyo ayaan u socdaaye, 3-dii ... Waxaase wax walba iiga daran oo aan illaawi la'ahay Axadda aniga oo lacagta oo dhan u soo diray ayaan subaxa Isniinta la soo hadlay sii aan u hubiyo inuu lacagti helay iyo inkale taleefanki wuu xirtay baraaha aan ku xiriirin jirnayna Block ayuu iga saaray.Nafyahay markii hore candhuuf baan ahaa, Allah awoodda badani uurka hooyaday ayuu guri iiga dhigay, waxaan u baahdaba waa igu siiyey, dabeed dhabta hooyaday ayuu iisoo saaray… Rabbiga Ra’uufka ahi, cadaabta haka dhowree, il qabowsigeedaan ahaa, dhabarkeeda ayeey dhib kasta iga xejisay, itaalkeeda gaajo waa iga dhowrtay…
May 03, 2012 · Ayaan si kacsan ugu jawaabay. Subxaana-laah, qadafku ma fiicnee, wuu soo noqonayaa ayuu si dejin iyo duridi ku jirto ii yidhi. Waayahay adeer intaan ku idhi, ayaan meel bannaanayd salka la helay oo aan xiiq gooyay. Kii yaraana shaah uu hore u cabayay ayuu halkeer firi-riqda kaga saaray.
Aug 27, 2018 · “Anigoo 23 jir ah godkii la igu xidhay, baa anigoo 50 jir ah la iga soo saaray”. ... Sixir ayuu ku dhacay malaayiin doollar July (5)
Ogaanshada waxay carruurta u soo jiidataa caafimaad helid. Ubadkaaga wuxuu iman doona baxnaaniska wuxuuna saamayn doona cabbirida-cpup. Maadaama aysan sahlanayn macnaynta in iyadoo ereyo la adeegsanaayo, ayaan
Mudo ayuu kala go’ay xariirkanaga, hadana isaga ayaa ilas soo xariirey, wuxuuna ii sheegey inuu hada baxayo si’uu usoo qaato wixii kaharey madaxiisa. Hadana,markii uu soo laabteyna waan soo siyaartey,waxaana wajigiisa kamuuqatey farxad aan lasoo koobi karin!
Jul 22, 2010 · saban kasta oo la joogay nolosha bani'aadanku waxu lahaa waxyaalo lagu qiimeeyo, ama dadku ku kala martabad sareeyo. nool iyo moodba, shaykasta oo maanta inala sahaalo ahi waxa jirtay goor uu figta sare kaga taagnaa sharafka, tusaale ahaan, waxa jirtay goor milixda ay dawladii Romanku mushahar ahaan u siin jirtay ciidankeeda, waxa jirtay goor qalinku (bronze) dahabka ka qanisanaa. casri kasta ...
Mar 30, 2017 · Najaashi intuu gacatiisa saaray jeebadii warqadu ku jirtay ayuu dhahay aniguna taasbaan rumaysanahay, isagoo ujeeda wixii warqadaas ku qornaa. Kolkaa way iskaga dareereen, hase ahaatee qolo kamid dadkaas ayaa kacdoon dagaal layimid. “Sheeko iga dheh,” ayay tiri Shukri. “Haye, yaa ku xigo?” Macow dib dib ayuu isku reebay—oo isqaafiyay. Cali-xariif ayaa soo baxsaday. “Wuxuu sheegaayo taano ma joogto,” ayuu yiri Cali-xariif. “Aniga iga dhageyso dhibta aan nolosha ka soo maray iyo sida aan isku dabbaray.” “Bal haddaba soo daa,” ayay tiri Shukri. Dec 20, 2018 · Aniga waxaan ahay (wiil 16, sanno jir ah) waxaan maanta galmo la sameeyay saaxiibtayda waxaana dhaawac gaarsiiyay xubinkayga taranka. Wuu jabay waxaana maqlay cod jabitaan ah. Hadda wuu bararsanyahay midabkiisana waa buluug. Aad ayuu u xanuunayaa. Miyuu iga jabay?
Macalinka reer Spain ee Mikel Arteta ayaa Mesut Özil ka saaray gabi ahaanba qorshihiisa xilli hore, laakiin arinta waxay sii xumaatay, kaddib markii si rasmi ah looga reebay liiska xiddigaha Gunners ee ka qayb qaadan doona horyaalka Premier League iyo tartanka Europa Leaguec xilli ciyaareedkan 2020/2021.